Inona no mety hatao ny sabata ?
Naseho ny : 22 janoary 2020
Alarobia 22 janoary 2020 — Herinandro faharoa mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 3, 1-6 — Velomy araka ny hatsaram-ponao aho, mba hitandremako ny Fanambarana avy amin'ny vavanao.
Mitohy hatrany ny adihevitra momba ny sabata. Voalaza omaly fa ny aina no tanjona, ary ambonin'ny zavatra rehetra ny famonjena. Mety manaiky izany isika eo am-bava, fa tena izany tokoa ve? Eto àry, i Jesoa dia manontany hoe inona no mety? Ny manao soa sa ny manao ny ratsy rehefa sabata ny andro? Ny mamonjy sa ny mamono? Mampitodika ny tsirairay amin'ny kônsiansiny Izy. Te hanontany hoe: "Azonao ve ny votoatin'ny lalàna? Azonao ve ny votoatin'ny sabata izay androm-pamonjena, andron'ny fiainana, andro fanaovan-tsoa?" Izay mamonjy olona latsaka an-katerena dia sitrak'Andriamanitra tokoa na rahoviana na rahoviana.
Nijery ireo mpampihatra lalàna hamoretana i Jesoa. Nijery azy ireo tamin-katezerana ary nalahelo. Tena olombelona tokoa i Jesoa, olombelona zato isan-jato fa tsy saritsariny fotsiny akory, nanana fihetsem-po tahaka ny olona rehetra. Izay tena maha olombelona azy izay no mahatanteraka ny famonjena tokoa. Na tezitra aza anefa Izy, tsy nanao ratsy, tsy nanota. Mampianatra antsika hanindry ny fihetsem-po izany. Matoa fampianarana aloha no nataon'i Jesoa vao nanasitrana ilay marary, dia satria misy saina sy fanahy tiany hapetraka ao: tsy mpananao fahagagana fotsiny Izy, tsy mpanao "magie", fa Mpamonjy ka finoana no entina manatona azy.
Averina ihany fa tsy fitia te handika lalàna ny an'i Jesoa, na sanatria koa fandranitana ady amin'ireo Farisianina sy mpanora-dalàna sarotsarotiny, fa te hampianatra antsika Izy fa ny aina sy ny maha olona aloha no tanjona. Ary tsy ny lalàna fa ny fiainana. Aoka àry, ho maimay isika hamonjy fanahy fa izany no sitrakan'Andriamanitra.